Talyaaniga oo xabsi guri galliyay Captan Markab Dalxiis – SBC
Talyaaniga oo xabsi guri galliyay Captan Markab Dalxiis
Posted by Webmaster on Janaayo 18, 2012 Comments
Garsooraha Maxkamada Dalka Talyaaniga ee dhawaan la soo tagay kaptankii waday Markabkii dalxiis eek u dagay xeebaha dalka talyaniga ayaa ku xukumay Kaptanka Markabkaasi in la geliyo xabsi guri tan iyo inta laga soo dhameystirayo eedeymaha loo haysto.
Go’aanka Maxkamada ayaa yimid xilli lagu eedeynayo Kaptankii Markabkan Francesco Schettino in uu si ula kac ah u dayacay markabka iyo dadka saarnaa oo ku dhawaa 4,000 oo qof isaga oo ka soo baxay qeybta markabka laga wado.
Kaptanka ayaa markii wax laga weydiiyay waxaa uu meesha ka saaray eedeymaha loo soo jeediyay isaga oo sheegay in arintaasi ay tahay been abuur waxaana uu qiray in uu gudaha markabka ku jiray tan iyo intii ay socotay khalkhalka Markabka galay.
Markabka Costa Concordia oo ahaa markab dalxiis oo xeebaha Dalka Talyaaniga ku degay ayaa waxaa ku dhintay 11 qof oo meydkooda la helay waxaana dhinaca kale la waayay 24 qof oo kale kuwaasi oo markabka la socday.
Dadka dhintay iyo kuwa la waayay waxaa ku jira Dad u dhashay wadamada Germany, Italy, France iyo US waxaana socda dadaalka lagu raadinayo dadka meydkooda la wayay Howlgalka Baadigoobka ayaa socda Habeen iyo Maalin.
Kaptanka markabka oo iminka loo haysto eedea qasaaraha markabkaas ka dhashay ayaa xabsi guriga ku jiri doona inta garsoorka maxkamada uu soo uruurinayo eedeymaha iyo codod uu duubay markabka qeybtiisa Keydka taasi oo laga helay codod uu kaptanku leeyahay.